Teôfania - Wikipedia
Ny teôfania dia fisehoan' ny andriamanitra na fisehoan' Andriamanitra izay matetika isehoan' ny fanambaràna ny hafatry ny andriamanitra na ny hafatr' Andriamanitra amin' ny olombelona na fampitandremana azy.
Ny teny hoe teôfania dia avy amin' ny teny grika hoe θεοφάνεια / theophaneia, izay avy amin' ny teny hoe θεός / theos "andriamanitra" sy ny hoe φαίνειν / phanein izay midika hoe "miseho", "maneho". Tamin' ny voalohany ny teny hoe θεοφάνεια / theophaneia, tao amin' ny fivavahan' ny vahoaka grika tamin' ny Andro Taloha dia nilazana ny firavoravoana anehoana ampahibemaso ny sarivongan' ny andriamanitra grika rehetra. Matetika dia tao amin' ny tananan' i Delfôy (grika: Δελφοί) no nanatanterahana izany.
Ny fivavahan' ny grika tamin' ny Andro Taloha, ny fivavahana jiosy, ny fivavahana kristiana ary ny fivavahana hindoa dia iresahana ny hoe teôfania.
Tamin' ny andron' ny kristianisma dia nitahiry ny dikany ara-bakiteny hoe "fisehoan' Andriamanitra" ny hoe teôfania: ny fanambaràn-tenan' Andriamanitra teo amin' ilay roimemy tsy mety levon' ny afo tamin' i Mosesy (na Moizy) sy ny fahaterahan' i Jesoa (na Jesosy) ary ny fanaovana batisa (na batemy) azy tao amin' ny ony Jordàna dia samy heverina fa teôfania avokoa ao amin' ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Amin' izao fotoana izao dia ankalazaina amin' ny andron' ny Epifania ny teôfania.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Teôfania&oldid=1038332"
Voaova farany tamin'ny 2 Oktobra 2021 amin'ny 10:17 ity pejy ity.